Olee otú iji weghachi iPhone si iTunes na iCloud ndabere
Gịnị mere Ị Chọrọ Weghachi iPhone
Ọtụtụ nwere ihe mere adị n'ihi na-eweghachiri gị iPhone. Akacha,-adịghị ala ala iPhone nsogbu bụ ihe mkpali. N'ọnọdụ ụfọdụ, a sluggishness na malite n'elu, n'idebata ngwa ma ọ bụ ọbụna igbu oge na iji kọmputa ede na gị iPhone si keyboard nwere ike ịbụ na-ata ụta. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ngwa ugboro ugboro ugboelu ma ọ bụ ọ bụrụ na gị iPhone amama onwe ya anya, ọbụna mgbe batrị a n'ụzọ zuru ezu ebubo.
Iweghachi gị iPhone resets ya ụlọ ọrụ ntọala pụtara ọ bụla customizations na ị na setịpụrụ n'elu ya lifespan na-ehichapụ. A na-agụnye mgbanwe dị mfe na ọnyà dị ka mwube dị iche iche ụdaolu maka ozi na nọmba ma ọ bụ ihe oyiyi gị ịtọ dị ka gị iPhone uyen, ihe omenala ntọala, dị ka keyboards n'asụsụ dị iche iche na formatting nke oge na ụbọchị na gị iPhone. N'agbanyeghị nke complexity, mgbanwe ọ bụla i mere gị iPhone ebe ị zụrụ ọ bụ nrụpụta mgbe ị weghachi.
Olee otú iji weghachi iPhone
Nkebi nke 1: Ngwaọrụ na-enyere gị aka Weghachi iPhone Part 2: Weghachi iPhone si iTunes ndabere Part 3: Weghachi iPhone si iCloud ndabere
Nkebi nke 1: Ngwaọrụ na-enyere gị iji weghachi iPhone
Ụwa mbụ iPhone data mgbake software naghachi furu efu kọntaktị, SMS, foto, ndetu, na ndị ọzọ.
Weghachi iPhone kpọmkwem site iOS ngwaọrụ, iTunes ndabere nakwa dị ka iCloud ndabere.
Weghachite iPhone data ruo 18 faịlụ na ụdị, gụnyere kọntaktị, ozi, foto, ndetu, wdg
Full dakọtara na iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) 5 / 5S / 5C / 4S / 4 / 3GS.
Weghachi iPhone na efu data ọnwụ, 100% mma.
ndị ebudatara ya /
Naputa site na iDevice
Naputa site na iTunes
Naputa site na iCloud
Na-agba ọsọ na ngwá ọrụ na kọmputa gị, na jikọọ na gị iPhone na kọmputa na eriri USB.
Ọ bụrụ na ị na-eji ihe iPhone 4 ma ọ bụ iPhone 3GS, ị nwere ike ịgbanwee gaa na "Advanced Mode" site bọtịnụ na ala-nri akuku.
Nzọụkwụ 2. iṅomi na-agbake gị iPhone furu efu data
Pịa "Malite iṅomi" na-esi gị iPhone scanned ozugbo. Doppler-ewe gị oge ụfọdụ. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ na Doppler N'ihi. All data furu efu na ẹdude na gị iPhone na-egosi na edemede. -Aga n'aka ekpe-n'akụkụ kọlụm na ịhụchalụ data otu otu. Tinye akà rà ihe ọ bụla ihe ị chọrọ na pịa "Naghachi" zọpụta data na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị ngwá ọrụ na ịhọrọ iTunes ndabere
Na-agba ọsọ na ngwá ọrụ, na isi window-abịa si. Pịa "naputa site na iTunes ndabere File" n'elu nke isi window.
Dị ka ị na-ahụ, gị niile iTunes ndabere faịlụ gị iPhone nke mgbe synced na iTunes na nke a na kọmputa na-depụtara ebe a. Họrọ otu iTunes ndabere faịlụ na pịa "Malite iṅomi" na-wepụ ya.
Nzọụkwụ 2. Naghachi iPhone si iTunes ndabere
Ugbu a, ihe niile data na iTunes ndabere faịlụ na-amịpụtara na-egosipụta na edemede. Ịhụchalụ ha na selectively akara na-agbake ndị ị chọrọ site na ịpị "Naghachi" na ala.
Rịba ama: The data egosipụta na Doppler N'ihi nwere ehichapụ na ẹdude ihe na gị iPhone. Ma nke ha nwere onwe ha na agba. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikewapụ ha, ị pụrụ iji bọtịnụ n'elu: Naanị gosipụta ehichapụ ihe.
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị ngwá ọrụ ma họrọ weghachi iPhone si iCloud
Mgbe na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone maka iOS, ịhọrọ Iweghachi mode - "naputa site na iCloud ndabere faịlụ" n'elu. Mgbe ị na-a window ke ziri ezi. Wet ke gị iCloud akaụntụ na paswọọdụ iji banye.
Cheta na: a na ngwá ọrụ na-ewe gị nzuzo kpọrọ ihe. Ọ dịghị mgbe anyị na-a ndekọ nke ọ bụla gị Apple akaụntụ Ama ma ọ bụ ọdịnaya n'oge ọ bụla gị sessions.
Nzọụkwụ 2. iṅomi iCloud na nkwado ma weghachite gị iPhone
Ngwá ọrụ a chọtara niile iCloud ndabere faịlụ na akaụntụ gị. Họrọ gị chọrọ ka otu na pịa "Download" na-iCloud ndabere faịlụ ebudatara.
Mgbe ahụ, iṅomi iCloud ọdịnaya site na ịpị "iṅomi". Doppler ga-ezu na a nkeji ole na ole. Mgbe ahụ, preview fọrọ nke nta niile data gị iCloud ndabere faịlụ, gụnyere kọntaktị, ozi, photos, etc.Tick gị chọrọ data na pịa "Naghachi button" na-azọpụta ha na kọmputa gị 1 Pịa.
Rịba ama: Tupu emechi ndị ngwá ọrụ, ị nwere ike azụ Ihuenyo ka ihichapụ ebudatara iCloud ndabere na kọmputa gị. Mgbe ahụ abanye gị iCloud akaụntụ.
EaseUS MobiSaver Free bụ ihe dị mfe na-eji kpam free iPhone data mgbake ngwá ọrụ.
Naghachi WhatsApp akụkọ ihe mere eme si iPhone; weghachite ezoro ezo iTunes ndabere
Nkwado naghachi data si iPhone ma wepụ data si iTunes ndabere.
100% free naghachi ehichapụ kọntaktị, SMS, Edeturu, Videos, Photos, ect si iPhone, iPad, iPod aka.
Naghachi iPhone data furu efu ruru mberede nhichapụ, iOS nkwalite, iPhone furu efu / gbajiri.
Newly akwado iOS7, iPhone5s / 5c, iPad Air, iPad Obere na Retina Gosiputa.
Mụta ihe banyere EaseUS MobiSaver Free >>
Nkebi nke 2: Weghachi iPhone si iTunes ndabere
1. Content na ike / apụghị-eweghachi
iTunes nwere ike ndabere gị ntọala, Ozi, Igwefoto Roll, akwụkwọ, zọpụta egwuregwu, na ndị ọzọ na data. Backups adịghị nwere ọdịnaya synced gị iPhone, dị ka na fim, egwú, pọdkastị, na ngwa.
I nwere ike ichebe gị ndabere na a passcode na iji encrypt ndabere nhọrọ ke Summary ebi ndụ. Encrypting gị ndabere ga ndabere gị Eriri Ngakọ Igodo. N'ụzọ dị otú a, na akaụntụ email okwuntughe, Wi-Fi okwuntughe, na okwuntughe ị banye weebụsaịtị na ụfọdụ ngwa ga na-echeta mgbe ị nyefee ka a ọhụrụ iPhone.
Kọntaktị gị bụ akụkụ nke ndabere iji chebe-adịbeghị anya oku na ọkacha mmasị anatara. Back gị kọntaktị na a na-akwado Personal Information Manager (PIM), iCloud, ma ọ bụ ndị ọzọ na ígwé ojii dabeere ọrụ zere ihe ọ bụla nwere ike kọntaktị data ọnwụ.
2. Nzọụkwụ iji weghachi iPhone si na mpaghara bakup faịlụ
1.Connect gị iPhone na kọmputa ị na-ejikarị mmekọrịta na na na-họrọ gị iPhone.
2.Click Summary na pịa Weghachi ndabere ....
Cheta na: Ọ bụrụ na gị ndabere na-ezoro ezo, iTunes-ajụ gị ịbanye paswọọdụ tupu Iweghachi gị faịlụ na ntọala. Ezoro ezo backups nwere mkpọchi na akara ngosi na ndepụta nke backups na iTunes iPhones preferences.Encrypt gị backups: Họrọ "encrypt iPhone ndabere," pịnye a paswọọdụ, na pịa Set paswọọdụ.
3. Olee ebe na-iTunes backups echekwara na kọmputa gị
The nchekwa ebe gị ndabere data na-echekwara na-adabere na sistemụ arụmọrụ kọmputa. Jide n'aka na nkwado ndabere na nchekwa a gụnyere na gị data-ndabere na-eme. iTunes nsị ndabere faịlụ na-esonụ ebe:
Mac: ~ / Library / Ngwa Nkwado / MobileSync / ndabere / The "~" na-anọchi gị Home nchekwa. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ Library n'ụlọ gị nchekwa, jide Option na pịa Go menu. Windows XP: \_ Documents na Mwube \_ (aha njirimara) \_ Ngwa Data \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ ndabere \_ Iji ngwa ngwa ịnweta Ngwa Data nchekwa, pịa Malite, ma họrọ Run. Ụdị% AppData% na pịa OK. Windows Vista / 7/8: \_ Ọrụ \_ (aha njirimara) \_ AppData \_ agagharị \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ ndabere \_ Iji ngwa ngwa ịnweta AppData nchekwa, pịa Malite. Na search mmanya, ụdị% AppData% na pịa Return.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị chọrọ, ị pụrụ ihichapụ a ndabere. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ a ndabere kere site iTunes, eso ndị a: - Open iTunes Mmasị: Windows: Họrọ Dezie> Mmasị Mac: Họrọ iTunes> Mmasị - Pịa iPhones (gị iPhone dịghị mkpa ka ike jikọọ). - ITunes ga-egosi na nọmba ekwentị, IMEI, na Oghere Usoro ọgụgụ nke kwadoo iPhone mgbe ị egosiputa gị òké pointer n'elu a ndabere (iTunes-egosi nanị Oghere Usoro ahụ nọmba maka iPad na iPod aka). Ị nwere ike iji nke a iji chọta nkwado ndabere na mpaghara ị chọrọ ka ihichapụ. - Họrọ ndabere ị chọrọ iji wepụ na pịa Hichapụ ndabere.
Nkebi nke 3: Weghachi iPhone si iCloud ndabere
1. Content na ike /-apụghị weghachi si iCloud ndabere
iCloud na-eme ka iTunes ọbụna mma, n'ihi na egwu gị, fim, TV na-egosi, ngwa, akwụkwọ, na ndị ọzọ na-ebi ndụ ọ bụghị naanị na kọmputa gị, ma na gị niile ndị ọzọ iPhones, kwa. Ka ihe atụ, na iCloud, na music ị zụrụ si iTunes Store na-akpaghị aka na-egosi na gị niile iPhones.
Na iCloud, ị nwere ike nweta ihe iCloud.com akaụntụ email na nke ahụ bụ ad-free, bụ ruo ụbọchị n'ebe nile ị na-elele ya, na-agụnye webmail na iCloud.com. Dị na ịgbanwuo Mail na iCloud ntọala na-eso onscreen ntuziaka.
2. iCloud nchekwa na nkwado ndabere na mpaghara
Mgbe ị na-edebanye aha maka iCloud, ị na-akpaghị aka na-5 GB nke free nchekwa. Gị iCloud nchekwa na-eji maka iCloud ndabere, ngwa data na akwụkwọ echekwara na iCloud, na iCloud Mail (gị @ icloud.com akaụntụ email).
iCloud na-akpaghị aka Akwadoo elu gị iPhone n'elu Wi-Fi kwa ụbọchị ka ọ na-agbanwuru ha, na ekpochi, na ejikọrọ a ike isi iyi. Na gị iPhone ọmụma kwadoo na iCloud, ị nwere ike mfe melite a ọhụrụ iPhone ma ọ bụ weghachi ọmụma na otu i nwere.
Gị iPhone ndabere nanị na-agụnye data na ntọala ịchekwa na gị iPhone. Ọ na-adịghị na-agụnye data ama echekwara na iCloud, ihe atụ kọntaktị, kalenda, ibe edokọbara, mail ozi, ndetu, na-akọrọ foto iyi, My Photo Stream, na akwụkwọ ị na-azọpụta na iCloud iji iOS ngwa ọdịnala na Mac ngwa.
3. Weghachi gị iPhone site na iCloud ndabere.
Nzọụkwụ 1. On gị iPhone, na-aga Ntọala> General> Software Update. Ọ bụrụ na a ọhụrụ version nke iOS dị, na-eso onscreen ntuziaka ka ibudata ma wụnye ya. Ị ga-imelite gị iPhone ka ọhụrụ version nke iOS ijide n'aka na ị nwere ike iweghachi si a na-adịbeghị anya ndabere nke ọzọ iPhone, dị ka a furu efu ma ọ bụ agbajikwa iPhone.
Nzọụkwụ 2. Jide n'aka na ị nwere a na-adịbeghị anya ndabere iji weghachi si. Gaa Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere, ahụ anya na ala nke ihuenyo maka ozi Ikpeazụ ndabere, sochiri ụbọchị nke ọhụrụ ndabere.
Nzọụkwụ 3. Gaa Ntọala> General> Tọgharia, mgbe ahụ enweta ihichapu niile ọdịnaya na ntọala.
Nzọụkwụ 4. Na Mbido nnyemaaka, gaba melite gị iPhone, enweta Weghachi si a ndabere, mgbe ahụ, banye na gị iCloud.
Nzọụkwụ 5. gaba Họrọ ndabere mgbe ahụ họrọ site na ndepụta nke dị backups na iCloud.
4. Mgbe eji ihe iCloud ndabere iji weghachi ma ọ bụ melite iPhone:
Mwube gị na akaụntụ na-weghachiri eweghachi si iCloud ndabere ị họọrọ. Gị iPhone malitegharia na-amalite nbudata na gị zụrụ music, fim, TV na-egosi, ngwa, akwụkwọ, Igwefoto Roll, na ndị ọzọ ọdịnaya. Ọ bụrụ na gị iPhone enweghị ike ibudata version nke ihe ngwa na kwadoo, ọ Downloads ọhụrụ version. Gị zụrụ ọdịnaya na-akpaghị aka ibudatara na iTunes Store, App Store, ma ọ bụ iBooks Store dabeere na iTunes na ígwé ojii nnweta site mba. Previous ịzụrụ nwere ike ịbụ dịghịzi adị ma ọ bụrụ na ha na e refunded ma ọ bụ na-aba dị na ụlọ ahịa.
- Ị nwere ike-jụrụ ịbanye okwuntughe iTunes, App Store, na iBooks Store akaụntụ iji weghachi zụrụ ihe.
- Ọganihu Ogwe-egosi n'okpuru Home ihuenyo oyiyi maka ngwa a na-ebudatara. Iji mee ka ihe ngwa a mkpa maka nbudata, enweta ya akara ngosi. Iji ego ma ọ bụrụ na ozi na gị iPhone a n'ụzọ zuru ezu weghachiri eweghachi, na-aga Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere.
A Great iPhone Nyefee Ngwá Ọrụ maka Ị
Export iPhone Ozi Computer
Nyefee iPhone Photos ka Computer
Nyefee iPhone Content ka Android
Easy Ụzọ ndabere iPhone ka PC
Iche n'etiti Android & iPhone
Best 17 ngwa ọdịnala n'ihi iPhone Ọrụ
Nyefee ngwa site iTunes ka iPhone
Jailbreak iPhone 4S na-agba iOS 7
Bugharịa Data si Blackberry ka iPhone
> Resource> Naghachi> Gịnị Na-iPhone Iweghachi na Olee otú iji weghachi iPhone si iTunes na iCloud ndabere